Mampiady ny vahoaka Malagasy i Dr Simao ! – MyDago.com aime Madagascar
Magro 04 fev 11
Nandray fitenenana tao amin’ny kianjan’ny Finoana Atoa Raveloson Constant tamin’ity Zoma 04 Febroary ity ary namotsipotsitra ny tsy mety nataon’ny mpanelanelana avy amin’ny SADC dia i Dr Simao.
Tsy misy afa-tsy ady Seza no mahatonga ireo hery politika sasany mankatoa ny sori-dalana natolotry Dr Simao iny hoy izy. »Tsy mampivoaka amin’ny krizy anefa iny fa vao maika mampiady ny samy Malagasy, rehefa tsy mifandamina amin’ny ankolafy telo i Andry Rajoelina dia tsy hisy fankatoavana iraisam-pirenena izany eo hoy hatrany ity « mafana » ity.
Manoloana ny tsy fahazoana fankatoavana sy tsy fivoahana amin’ny krizy lavareny dia nazava ny hafatry Raveloson : « rehefa tsy hainareo ny mitantana ny firenena aleo miverina ny filoha Ravalomanana ary izy no hampilamina ny tany sy ny firenena », tamin’izany ihany koa no nilazany fa mila miomana handray ny fitondrana ny mpanaradia amin’ny ankolafy telo fa tsy ho ela intsony izany ary mila miomana ihany koa ny any amin’ny faritra hoy hatrany izy.
Nanentana ny vahoaka ho avy marobe ny mpandaha-teny fa misy hafatra lehibe mahakasika ny 07 febroary avoaka eny an-kianja rahampitso.
Ecoutez-Foany io referendum io fa mampiady vahoaka (Ratsiraka)
Auteur Solo RazafyPublié le 4 février 2011 Catégories Magro, Malagasy, Négos, Politique
Précédent Article précédent : 2 Videos Ranaivoson Henry Roger 04/02/2011
Suivant Article suivant : Solution à cette feuille de route pro-foza